Ningbo BestCleaner Co., Ltd.founded 2015 oo ku yaal magaalada picturesque xeebta - Cixi, taas oo ku taal bangiga koonfureed ee Hangzhou Bay, oo goobta joogay la dekedda Ningbo xagga bari, iyo wajahaya Shanghai badda ku woqooyi.
Shirkadda Our ku takhasustay soo saarista huufarka, oo ay ku jiraan cilmi baarista, design, wax taaj oo kale, cirbad iyo assembling.We soo saari kartaa 2500 kumbiyuutarada maalin kasta.
Ningbo BestCleaner Co., Ltd. (BVC soo gaabiyo) u hibeeyeen ilaa ay abuuraya qiyamka dheeraad ah oo macaamiisha iyo hagaajinta iibsiga experience.With R horseedka & awoodda D ee dunida, wax soo saarka ee BVC waa cusub, newfangled iyo dabeecad, taasoo keenaysa in ay arrimuhu vacuum warshadaha nadiifsan ee, dadka Dhanka kale, BVC soo hagaagtay, s tayada nolosha iyo deegaanka.
BVC waxaa ku raran yihiin hal-abuurka taas oo ku urursan iyo professional.As horyaal ah warshadaha nadiifiye, our mission waa siiyaan wax soo saarka ugu fiican iyo adeegga macaamiisha, dhanka kale, si loo hagaajiyo waayo-aragnimo shopping ee kaamil ah, ku haboon iyo welwelin-free-iibka ka dib.
BVC Brand Image waxaa si fiican u yaqaan in China.The dhaqanka xudunta u ah BVC: .Hubi daahirka ah hawl yar, ha nolosha fiican!
Haddaba, waxaan soo saari karaan dhammaan noocyada kala duwan Coobbi kayd Vaccum, Car huufarka, nadiifiyaha Robot Waxaan helay ee caddeyn ah Sudee, CE iyo CB.Welcome inaad la xiriirto nala: weydiinta Welcome iyo Booqo Us:
Waxaan rajeynaynaa in aan wada shaqeyn kula!